आज बिहीबार, कस्तो छ तपाइको राशिफल? - Everest Dainik - News from Nepal
आज बिहीबार, कस्तो छ तपाइको राशिफल?
वि.सं.२०७६ साल असोज २३ गते । बिहीबार । इस्वी सन् २०१९ अक्टोबर १० तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४१ । आश्विन शुक्लपक्ष । तिथि द्वादशी,३४ घडी ४१ पला,बेलुकी ०७ बजेर ५३ मिनेट उप्रान्त त्रयोदशी । नक्षत्र शतभिषा,५३ घडी १९ पला,रातको ०३ बजेर २१ मिनेट उप्रान्त पूर्वाभाद्रपदा । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आर्थिक अभावले रोकिएका कामहरू तीव्र गतिमा सञ्चालन हुनेछन् । स्रोत साधनको प्रयोग गरी अग्रगामी छलाङ मार्न सकिनेछ । शिक्षा तथा शिक्षा पेसा सँग सम्बन्धित कामहरूबाट आम्दानी बढाउन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ भने जीवन साथी सँग थप आत्मीय भाव बढ्नेछ ।
वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) साथीभाइहरूको सहयोग पाइनेछ भने आफन्त तथा प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइने समय छ। नयाँ वस्त्र र स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिएर जाला।
याे पनि पढ्नुस सोमबार कस्तो बित्दैछ तपाईंको दिन ? पढ्नुस् राशिफल
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट विशेष सामान तथा उपहार प्राप्त हुने योग रहेको छ । पढाईकै सिलसिलामा लामो दुरीको यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । माया प्रेममा नजिक भई रमाउने समय रहेको छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक संकटले सताउन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। समय र नियमलाई बेवास्ता गर्दा चुनौती आइलाग्नेछन्। दण्ड वा जरिवानामा परिने सम्भावना छ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) व्यापारमा घाटा लाग्ने योग रहेको छ भने व्यापारको सिलसिलामा गरिने यात्रा निरर्थक हुनेछ । सवारी साधन तथा विलासी बस्तुको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ । आत्मबल तथा सम्यम्मता गुमाउँदा आफैलाई घाटा लाग्न सक्छ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) प्रतिस्पर्धा तथा यस्तै क्रियाकलापमा भाग लिई नाम कमाउन सकिनेछ । पुराना ऋण चुक्ता गर्न सकिनेछ भने पुराना रोगहरू केही भए स्वतः ठिक हुनेछ । व्यापार बिस्तार गरी मनग्गे आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो बित्दै छ तपाइको आजको दिन? हेर्नुस् राशिफल
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) बौद्धिक साहित्य तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रबाट नाम तथा दाम दुवै कमाउने समय रहेको छ । माया प्रेममा नजिक हुने तथा मन परेका मानिसबाट उपहार प्राप्त हुने योग रहेको छ । आफन्त तथा छोराछोरीसँगको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ ।
वृश्चिक (तो,ना,नि,नू,ने,नो,या,यी,यु) रमाइलो वातावरणमा पनि मन खिन्न हुनेछ । साथीभाइ तथा आफन्तसँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ ध्यान दिनुहोला । प्रेममा एक अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्दा वैमनश्यता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसाय समय लगानी गरे पनि आम्दानी थोरै हुनेछ । आमा तथा आफन्तसँग टाढिने योग रहेको छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) तपाईँले सुरु गर्नुभएको कामको दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट उच्च मुल्याङकन हुने ग्रहयोग रहेकोेछ । व्यापार व्यवसायमा भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ भने छोटो तथा रमाइलो व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ । आफ्नो प्रिय पात्रलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज कस्तो बित्दै छ तपाइँको दिन? हेर्नुस् यस्तो भन्छ राशिफल
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) विद्या तथा प्रतिस्पर्धिहरू हार खानेछन् भने तपाईँको कुरा काट्नेहरुलाई पाठ सिकाउन सकिनेछ । परिवारका साथ रमाइलो वातावरण तथा हास खेलमा समय बित्नेछ । पढाई लेखाइमा थोरै समय दिँदा पनि उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत गरी अध्ययन गर्दा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्ने योग रहेको छ । सुन्दर तथा विलासिताका सर-सामान प्रयोग गरी अरूको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । लामो समयदेखि बिछोड भएका मित्रहरूसँग भेट हुनाले दिन रमाइलो गरी बिताउन सकिनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) आफन्त तथा साथीभाइहरूले खासै सहयोग गर्ने छैनन् । पढाई लेखाइमा ध्यान नजाँदा अरूभन्दा पछि परिनेछ । कामलाई दोहोर्‍याएर गर्नु पर्दा मानसिक तनाव बढ्नेछ । स्वदेशमा उत्पादित सामानको व्यापारमा मन्दी आउने भए पनि विदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
ट्याग्स: दैनिक राशिफल, राशिफल
कोरोना जितेकी गर्भवती भन्छिन्, ‘आत्मबल बढाए निको हुन्छ’
के नेपालमा लकडाउनको शैली परिवर्तन हुनु जरूरी छ ?
कोरोना प्रभावित विश्वकै ७औं देश बन्यो भारत
बाँके दुर्घटनाः घाइते हुनेहरूको परिचय खुल्यो (नामावलीसहित)
क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भएका बालकको कोरोना रिपोर्ट आयो
कोरोना कहरः प्रभावित टप–१०० देशको सूचीमा नेपाल